စပါး စိုက်ပျိုးရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန် မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် YR60D ကောက်စိုက်စက်
ကောက်စိုက်စက် အသုံးပြုခြင်းသည် အလုပ်သမားများ ဖြင့် စိုက်ပျိုးရသည့် ကုန်ကျစရိတ် ၊ ကြာချိန် နှင့် အားစိုက်လုပ်ဆောင်ရခြင်း စသည့်အချက်များတွက် ပုံမှန်လက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်း၊တိုက်ရိုက်ပျိုး ကြဲခြင်း ထက်ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ကောက်စိုက်စက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးနှုန်းပိုမိုလာပြီး အကျိုးအမြတ်များလည်း ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။
၁. စပါးကွင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပမာဏ အတိုင်း ချိန်ညှိ စိုက်ပျိုး နိုင်ခြင်း
ကောက်စိုက်စက်သည်စပါးပင်များအား ညီမျှသည့် ကြီး ထွားနှုန်း ရရှိနိုင် ရန် မပြောင်းလဲ သော အချိန်အပိုင်းအခြားတိုင်း (၁) ကိန်းသေ မျိုးစေ့ အရေအတွက် ဖြင့် ၎င်း (၂) ပုံသေ အနက်ဖြင့် ၎င်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
၂. စွမ်းအင်အပြည့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ ဆီစားသက်သာသည့် အင်ဂျင်
ပိုမိုကြာရှည်ခံသည့် စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် သက်သာသည့် ဆီစားနှုန်းဖြင့် ရေနက်ကွင်းများတွင်လည်း မပြောင်းလဲသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်း နိုင်သည့် Yanmar 3TNM72 မြင်းကောင်ရေ (၂၀.၉) အင်ဂျင် တပ်ဆင်အသုံးပြုထားခြင်း
၃.လွယ်ကူစွာ မောင်းနှင် နိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့် HMT ဂီယာဘောက်
ပိုမို ချောမွေ့ပြီး လိုအပ်သည့်အမြန်နှုန်းကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်သည့် Hydro-Mechanical transmission ။ စိုစွတ်သည့် ကွင်းများတွင်လည်း အမြင့်မားဆုံး စွမ်းဆောင်၇ည်ဖြင့် စွမ်းအင်ပြည့်မောင်းနှင် နိုင် ရန်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း။
၄.စိုက်ကွင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်လည်း တည်ငြိမ်စွာ မောင်းနှင် နိုင်ခြင်း
ကြီးမားသည့် ဘီးများသည်ရေနက်ကွင်းများတွင် မောင်းနှင်သည့် စွမ်းရည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေနိုင်ရန် ပံ့ပိုး အကေူညီထားသည် ။ ဘီးအခြေထိ ပိုမို ရှည်လျားသည့် အတွက် တည်ငြိမ်သည့်ဟန်ချက်နှင့် လှုပ်ခါခြင်းကို နည်းပါးစေသည်။
၅. ကြီးမားသည့် ဆီသိုလှောင်ကန်
ဆီသိုလှောင်နိုင်မှု ပမာဏ (၃၇) လီတာ သိုလှောင်နိုင် သည့် သိုလှောင်ကန် တပ်ဆင်ထား သောကြောင့် လယ် (၁၁) ဧက ထိ ဆီပြန်လည်ဖြည့် တင်းရန်မလိုအပ်ပဲ အဆက်မပြတ် အလုပ်လုပ် နိုင်ပါသည်။
၆. လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
ရှေ့ခေါင်းခန်းအား လီဗာတချောင်းတည်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဖွင့်နိုင်ပြီး နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးခြင်းကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
ဘယ်ဘက် နှင့် ညာဘက်ထိပ် မျဉ်းအမှတ်ကြား
(မျဉ်းအမှတ် ပါဝင်ပါက) 3325
မြေပြင်နှင့် အလွတ်အကွာအဝေး အနိမ့်ဆုံး
- ဆလင်ဒါ ၃လုံး၊ ဒေါင်လိုက်၊ ရေအအေးခံ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်
စုစုပေါင်း ထုထည် အရွေ့
လီတာ (စီစီ) ဝ.၉၀၃ (၉၀၃)
အမြင့်ဆုံး အထွက်စွမ်းအား/ အရှိန်
ကီလိုဝပ် (မြင်းကောင်ရေ)/rpm ၁၅.၄ (၂၀.၉) / ၃၂၀၀
ဆီတိုင်ကီ ဝင်ဆံ့သည့် ပမာဏ
- လျှပ်စစ်ဖြင့် စတင်နှိုးခြင်း
- Ackerman (ပါဝါစတီယာရင်)
အမျိုးအစား x အရေအတွက်
- Puncture-free တာယာများ x ၂
- ရာဘာ ၂ ဘက်အုပ် တာယာများ x ၂
- ရှေ့ ၂ ချက်၊ နောက် ၁ ချက်
(HMT non-gear-stage transmission)
- ရိုထရီ အမျိုးအစား
ကောက်စိုက်သည့် အတန်း အရေအတွက်
အတန်းများ ကြား အကွာအဝေး
ကောက်ပင် တစ်ပင်ချင်းစီ၏ ကြား အကွာဝေး
စင်တီမီတာ ၂၈၊ ၂၀၊ ၁၇၊ ၁၅၊ ၁၂
အရေအတွက်/ ၃.၃ စတုရန်းမီတာ ၄၀၊ ၅၅၊ ၆၅၊ ၇၅၊ ၉၀
မီလီမီတာ ၁၅ မှ ၆၀ (အဆင့် ၆ဆင့်)
- အလိုလျောက် ထိန်းချုပ်စနစ် (UFO)
မီလီမီတာ/အကြိမ် ၁၁/၂၆၊ ၁၄/၂၀၊ ၁၆/၁၈
မီလီမီတာ/အကြိမ် ၈ မှ ၁၈ (အဆင့် ၁၁ ဆင့်)
မီတာ/စက္ကန့် ၀ မှ ၁.၆၅ (ချော်မှု အချိုး ၀ %)
- ၁၈ (၆)
မိနစ်/ဧက အနည်းဆုံး ၃၆
- အောက်ခံအခင်း ပျိုးပင်အမျိုးအစား
စင်တီမီတာ ၁၀ မှ ၂၅
အရွက် ၂ မှ ၄.၅
(အလျား x အနံ x အထူ (မြေဆီလွှာ))
စင်တီမီတာ ၅၈ x ၂၈ x ၃
- အင်ဂျင်ရေအပူချိန်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖိအား၊
UFO ပြဿနာ၊ ပျိုးပင်ထည့်ခြင်း၊
YR60D မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး